Magacaabistii, Melafsigii Iyo Xil Ka Maroojintii Boobe: Saddex aan wada socon ~ Qormadii 25aad | Somaliland Post
Home Maqaallo Magacaabistii, Melafsigii Iyo Xil Ka Maroojintii Boobe: Saddex aan wada socon ~...
Magacaabistii, Melafsigii Iyo Xil Ka Maroojintii Boobe: Saddex aan wada socon ~ Qormadii 25aad
(Maalin-qorka “Mucjisadii nagu soo martay Wasaaradda Warfaafinta: 19/3/12ka-4/9/12ka) Qalinkii Maxamed Cismaan Mire (Sayid) Guddoomiyaha Dawan Media Group.
Qormooyinkii 23aad iyo 24aad ee maqaaladeenan taxanaha ah waxa aynu si kooban ugaga soo hadalnay qiso ka mid ah sheekooyinkii tirada badnaa iyo xoggihii kala gedisnaa ee aynu ku soo helnay socdaalkii xaqiiqo raadiska ahaa ee aynu ku soo marnay magaalooyinka Herar, Dire-dawa iyo Addis-Ababa iyo weliba qaar ka mid ah meelihii kale ee ay mujaahidiintii ururka SNM joogi jireen, isla markaana ka hawlgeli jireen xilligii halganka ee ay dagaalka kula jireen nidaamkii keli taliska ahaa ee Siyaad Barre.
Iyada oo dhab ahaantiina qisadaasi si fiican inoogu iftiimisay xaqiiqooyin biyokamadhibcaan ah oo ku saabsan kaalintii uu Boobe kaga jirey halgankii SNM, in aanay ahayn kaalin waxtar shaqo ku lahayd, balse ay ahayd kaalin hantaaqo iyo hagardaamo ku ahayd halganka iyo mujaahidiintaba.
Hadaba inaga oo qisadaas iyo kuw kale ee aynu socdaalkaas xaqiiqo raadiska ah xogtooda ku soo helnayba dib ugu soo laaban doona, si faah faahsana ugaga warami doona qormooyinkeena dambe. Ayaan waxaan jecelahay in aynu mar kale dib u eegno isla markaana ka sii ambo-qaadno halkii ay inoogu joogtay sheekadii inoo socotey ee ku saabsanayd Musuq maasuqii ka dhacay wasaaradda warfaafinta mudadii Boobe joogay iyo sababihii keenay khilaafkii wasiirka iyo Agaasimeyaasha.
Inkasta oo musuq maasuqa barriinsaday wasaaradda warfaafintu aanu ahayn wax qarsoonaa oo maalin keliya uun lagu baraarugay, balse uu ahaa mid ay muddo dhawr bilood ahba hadal-hayntiisa iyo sheekadiisu ka socotey goobaha kala duwan ee dadweynahu ku kulmo, sida maqaaxiyaha, gaadiidka dadweynaha ee magaalada qaybaheeda look ala raaco iyo meelaha mafaariishta ah ee fadhi ku-dirirku fadhiistaan, marar kala duwana ay warbaahinta qaarkeedba ka hadashay oo wax ka qortay. Hadana markii ugu horeysay ee la arkay talaabo si rasmi ah loogu qaaday baadhista iyo wax ka qabashada musuq maasuqaasi waxay ahayd 30/07/2012-ka oo ahayd maalin Isniin ah. Waa maalintii uu Hantidhawrka Qarunka subaxnimada hore ku waabariistay xarunta wasaaradda warfaafinta, baadhista rasmiga ahna ka bilaabeen halkaas. Waxaana xusid mudan in wakhtiga ay wasaaradda yimaadeen kooxda ka socotey xafiiska Hantidhawrka ee baadhista samaynaysay uu ahaa wakhti salad hore ah, oo aanay madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda intooda badani shaqada weli soo gelin. Wax yar dabadeedse warka waa la wada hayey, inkasta oo aan warkaas isku si loo wada dareemin. Waxaana jirtey in masuuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda intooda badani ay baadhista Hantidhawrka u arkayeen arin loo baahnaa, oo ay ahayd in la sameeyo goor horeba. Halka qaarna u arkayeen arin iska caadi ah oo la xidhiidha oo la xidhiidha Hantidhawrkii oo shaqadiisii gudanaya. Waxaase jirey koox aan badnayn oo ka mid ahaa masuuliyiinta iyo hawl wadeenada wasaaradda oo ay baadhistaasi iyaga ku noqotay Qiyaamihii oo ifka loogu soo saaray, isla markaana ay deganaanshihii iyo xasiloonidiiba ka lumeen judhii ugu horeysay ee ay maqleen in wasaaraddii Hantidhawr galay. Kooxdaasi cid kale ma ahayn ee waa kooxdii awelba lagu xaman jirey in ay masuul ka yihiin musuq maasuqa iyo wax is dabamarinta wasaaradda lagu sheegi jirey. Weliba kooxdaas lafteedu iskuma jirine waxaa ugu darnaa laba nin oo kala ahaa wasiirkii wasaaradda ee xiligaas Boobe Yuusuf Ducaale iyo Agaasimihii maamulka iyo lacagta ee Tv-ga Xasan Maxamuud, kaas oo isaga dhawr cisho dabadeedba lagu eedeeyey in ay hanti faro badani ku maqantahay, isla markaana Hntidhawrku xabsiga u taxaabay, inkasta oo markii dambe damiin lagu sii daayey ilaa hadana uu damiinkaas ku joogo.